पूर्व हाम्रो किनारा आकाश लालटेन आए, तिनीहरूले उत्पत्ति कहाँ छ। अझै तिनीहरूले चिनियाँ आकाश लालटेन भनिन्छ। समय, आफ्नो लोकप्रियता हाम्रो साथ बढ्न सुरु हुन्छ।
परम्परा बलमा Zhuge लिआंग पहिलो पटक सुरु दोस्रो र सैन्य अभियान मा तेस्रो शताब्दीको सुरुमा अन्त वरिपरि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीलाई बताउँछ। यो प्रत्यारोपित यी शत्रु डर छ कि विश्वास छ। त्यसैले, वास्तवमा यो glace मा स्रोतहरू।
Braley ठूलो कागज झोला र यो तल ताप दीपक बाध्य उकालो लिफ्ट संरचना देखि दीपक तेल, गरम हावा राखिएको थियो। Zhuge लिआंग छेउमा केही केही deity, एक शब्द, तिनीहरूले हरर मा हावा मा प्रकाश देखि बह थिए भने शत्रु सेना, लाग्यो।
अन्य खाता अनुसार, चिनियाँ लालटेन सामान्य Chzhuge लीना को युग अघि, लगभग को III शताब्दी ई.पू. मा, Dzhozef Nidhem हामीलाई ल्याउँछ के प्रयोग भएको छ। सुरुमा बिस्तारै पूर्वी देशहरूमा एक धार्मिक महत्त्व मा लिन थाले चिनियाँ सेना आदेश संकेत आकाश लालटेन हृदय आपूर्ति गर्न प्रयोग।
2005 मा लेखक र फोटोग्राफर Chzhou पाप मात्र 5000 चिनियाँ लालटेन को थाईल्याण्ड तटों को समुद्र को एक मा खिच्नुभयो भव्य दृष्टि शोकमा स्मृति सम्मानको आकाश लगे भन्ने तथ्यलाई लागि, एक प्रतियोगिता मा कला र मनोरञ्जन को जर्नल मा दोस्रो लाइन को लागि पत्रकार विश्व प्रेस आयोजित आएको भारतीय महासागर मा भूकम्प। 2006 देखि युरोप मा सुरु - यसरी, बल को ठूलो उपस्थिति denoting पछिल्लो केही वर्ष चाहनुहुन्छ, र विशिष्ट हुन।
आधार बलमा सामान्यतया हल्का काठ प्रजातिहरु बनेको इच्छा - उदाहरणका बांस स्टेम लागि। थर्मल प्रयोग propulsor कपास सामाग्री, राम्रो दहनशील मोम संग गर्भवती छ, जो ठाउँमा। यो गर्भवती tkanki क्रूसमा फ्रेम संलग्न। एक जल पदार्थ प्राप्त गर्न अर्को तरिका - जल रसायन। आधार बल धारण छ मा, यो साधारणतया बनेको छ चामल कागज, एक विशेष उपकरण संग गर्भवती, यो प्रविधिको प्रयोग थप्न पनि सम्भव छ Mulberry। तपाईं पूर्ण अलग अलग हुन सक्छन् एक चिनियाँ लालटिन आकार बनाउन: सबैभन्दा अविश्वसनीय संग समाप्त सरल क्षेत्रहरू देखि।
बस बेलुन जस्तै, स्वर्गीय टर्च मा हावा ताप को गुहा भित्र गरिन्छ, हावा विस्तार, बाहिर बाट भन्दा भित्र घनत्व कम हुन जान्छ। र हाम्रो चिनियाँ लालटिन चिसो वातावरणमा अस्थायी।
हावा को घनत्व को टर्च को भित्र बाट पाठ्यक्रम विद्यालय भौतिक को एक सरल सूत्र द्वारा गणना गरिएको छ।
20 मिनेट, त्यो एक हजार मिटर धेरै आकाश लिन्छ जो समयमा - चिनियाँ लालटिन उडान 15 हुन सक्छ आनन्द लिनुहोस्।
यो टिप्पण, र कसरी सुरक्षित चिनियाँ लालटेन चलाउन लायक छ। यो आगो जोखिम प्रतिष्ठानहरु धेरै नजिक विमानस्थलमा नजिक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हावाको स्थिति मा nubesny टर्च गरौं यसलाई मनमोहक छैन बाहेक।
विवाह उपहार कसरी चयन गर्न
Elena को नाम दिन के हो? गरेको पत्ता गरौं
बेलग्रेड गढ: फोटो र विवरण
किशमिशसँग कपको तयारी छिटो र स्वादिष्ट हुन सक्छ
Fonit माइक्रोफोन भने